टिकटकबाटै व्यापार - मनोरन्जन - नारी
जेष्ठ १६, २०७८ टिकटक नहेरे त कुन गीत रिलिज भयो भनेर आजभोलि थाहै हुँदैन’ गायिका इन्दिरा जोशीले एक अन्तर्वार्तामा भनेको वाक्य हो यो । उनले भनेजस्तै पछिल्लो समय टिकटक रमाइलो सँगसँगै जानकारी लिने प्लेटफर्म बन्दै गएको छ । हरेक उमेर समूहका व्यक्तिमा यसको क्रेज बढ्दो छ । गीतमा लिपसिङ गर्दै बनाइने टिकटक भिडियो पछिल्लो समय व्यापार बढाउने माध्यमसमेत बन्दै गएको छ । आफ्ना सामानहरूको छोटो परिचय दिँदै टिकटकमा भिडियो हाल्ने क्रम बढेसँगै व्यापार पनि फस्टाउँदै गएको छ । अझ भनौं सामानको विज्ञापनका लागि टिकटक प्रभावकारी बन्दै गएको छ । बानेश्वरस्थित पूनम ब्युटी एकेडेमीकी सञ्चालिका पूनम श्रेष्ठले पार्लरमा उपलब्ध कस्मेटिक सामग्रीहरू टिकटकमा हाल्छिन् । आफ्नै आवाजमा भिडियो बनाउँदै पोस्ट गर्छिन् । सामानको परिचय र यसको उपयोगिता भिडियोमा उल्लेख गर्छिन् । उनको टिकटक भिडियो हेरेपछि थुप्रै कमेन्ट आउँछन् । उनलाई धेरैले सनस्किनका बारेमा सोध्छन् । उनी भन्छिन्, ‘मलाई कस्तो सनस्किन लगाउने भनेर धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्छ ।’ उनले टिकटकमार्फत धेरै ग्राहक पाएकी छन् । टिकटकसँग जोडिँदै उनले आफ्ना प्रोडक्टहरू अस्ट्रेलिया, अमेरिकासमेत पठाइसकेकी छन् । काठमाडौंबाहिर धेरै ठाउँमा उनले सामान बेचिसकेकी छन् । क्रिमहरूबारे जानकारी दिएकाले पनि ग्राहकहरू आकर्षित हुने गरेको उनी बताउँछिन् । उनी कस्मेटिक सँगसँगै घरायसी प्रयोगबारेमा पनि जानकारी दिइरहेकी हुन्छिन् । आफूले टिकटकमा कस्मेटिक र घरायसी सामग्रीहरूको प्रयोगबारे सही सूचना दिने गरेको उनी बताउँछिन् । उनका टिकटकमा २२ हजार फलोअर छन् । यसले गर्दा उनी एकैपटक धेरैमाझ पुग्ने गर्छिन् । टिकटकले उनलाई व्यापार सँगसँगै ब्युटी टिप्स दिन सहज भएको छ ।
भक्तपुरकी रसला कार्की (नाम परिवर्तन) टिकटक हेरेरै शान्तिनगरस्थित एक कस्मेटिक पसलमा पुगिन् । उनले उक्त पसलबाट सनस्किन, फाउन्डेसन, आइग्लासजस्ता कस्मेटिक सामग्रीहरू किनिन् । यसका लागि उनले विभिन्न कम्पनीका कस्मेटिक सामग्री छनोट गरिन् । ‘टिकटकमा देखेर नै यहाँ सामान किन्न आइपुगेकी हुँ’ उनी भन्छिन्, ‘यहाँका सामान राम्रो भएजस्तो लागेर किनें ।’ उनले उक्त टिकटकमा स्किनअनुसारको क्रिमबारे जानकारी पाएकी थिइन् । कस्तो कस्मेटिक सामान प्रयोग गर्ने उनी अनभिज्ञ थिइन् टिकटक जानकारीका लागि उपयुक्त प्लेटफर्म हुन थालेको उनी बताउँछिन् ।
टिकटकबाटै सही कस्मेटिक सामान रोज्न सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ । ‘टिकटकमार्फत नै हरेक कुराको जानकारी पाउँछु, उनी भन्छिन्, ‘टिकटक नहेरे त केही थाहै हुँदैन’ इलामकी सिर्जना सुब्बाले पनि टिकटकबाट व्यापार गर्न थालेको दुई वर्ष भइसक्यो । उनले टिकटकबाटै फेन्सी सामानहरूको थुप्रै व्यापार गरिसकेकी छन् । उनले टिकटकबाट साथीहरू जोड्दै आएकी छन् । पछिल्लो समय अनलाइन व्यापारभन्दा पनि टिकटक निकै प्रभावकारी हुन थालेको उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘अहिलेको समयमा व्यापारका लागि टिकटक निकै प्रभावकारी हुन थालेको छ ।’ टिकटक भिडियो देखेर अर्डर गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको उनी बताउँछिन् । इलाममा बसेर उनले काठमाडौं, बुटवल, धरान, बिर्तामोड आदि ठाउँमा फेन्सीका साथै रेडिमेड सामानहरू बेचिसकेकी छन् । उनी फेन्सी सामानहरूको भिडियो सँगसँगै फूलहरूको पनि भिडियो बनाउँछिन् । फूलहरूको भिडियो खिचेर उनले टिकटकमा हाल्ने गर्छिन् । भिडियो सँगसँगै उनले विभिन्न जानकारी पनि दिने गर्छिन् । फूल कसरी जोगाउने ? कस्तो मल प्रयोग गर्ने ? यस्ता थुप्रै जानकारी उनको टिकटक भिडियोमा राखेकी छन् । यसले गर्दा फूलको समेत व्यापार गर्न उनलाई टिकटकका फ्यानहरूले सुझाव दिने गरेका छन् ।
अनामनगरकी सुशीला कार्कीले टिकटकको माध्यमबाट हरेक सामान किन्न सहज भएको बताउँछिन् । कोरोना महामारीका कारण उनले लकडाउन सुरु भएसँगै टिकटक चलाउन थालिन् । टिकटकले हरेक कुरालाई सहज बनाएको उनी बताउँछिन् । टिकटकबाटै उनले घरायसी सामान, फेन्सी सामानदेखि कस्मेटिक सामान जोडेकी छन् । यति मात्र नभई विभिन्न परिकार बनाउन टिकटकबाट उनले सिकेकी छन् । हेर्दा रमाइलो लाग्नुका साथै ज्ञान लिनका लागि पनि उपयोगी बनेको छ टिकटक उनका लागि । टिकटकमा सामानको पूर्ण जानकारी हुनाले पनि धेरै सोच्नु नपर्ने उनी बताउँछिन् । घरमै बसेर टिकटकबाट धेरै कुराको जानकारी उनले लिने गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘टिकटकबाटै धेरै कुरा सिक्छु ।’